Baolina kitra – “CAN 2019” :: Nampodian’i Tonizia am-boninahitra ny Barean’i Madagasikara • AoRaha
Tapitra teo amin’ny ampahefa-dalana ny nofinofin’ny malagasy hahazo ny amboaran’i afrika tamin’ny fandraisana anjara voalohany, tamin’ity taona 2019 ity.Lavon’ny aigle de carthage avy any tonizia, tamin’ny isa 3 noho 0 ny barean’i madagasikara, omaly tao amin’ny kianjan’i al salam.Tsy nitsanga-menatra anefa ny malagasy satria isan’ireo ekipa valo voalohany tamin’iny fifaninanana iny, na vao sambany aza no nandray anjara tamin’ny dingana famaranan’ny CAN.
Tapitra hatreo amin’ ity dingana ity ny lalana ho an’i Madagasikara, izay azo heverina fa tsy nampitsanga-menatra, nandritra ny CAN 2019. Fanamby napetrak’izy ireo tamin’izany ny fivoahana ao anatin’ny vondrona ka hiatrika ny ampahavalon-dalana. Ankoatra ny nahatafitantsika ho eo amin’io dingana io dia i Madagasikara no nitana ny laharana voalohany tamin’ ireo mpiray vondrona tamintsika (Nizeria, Guinée ary Burundi). Isan’ireo nahatsara endrika antsika ihany koa ny fandresena an’ireo heverina ho goavana tany an-toerana toa an’i Nizeria sy RD Congo, talohan’ny nihin­tsanantsika teo anatrehan’i Tonizia.
Azo heverina ho mendrika ihany ny vokatra ho an’i Madagasikara tamin’ity fandraisana anjara voalohany tamin’ny dingan’ny famaranana ho an’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 ity. Isan’ireo firenena tsy maintsy niatrika ny lalao savaranonando i Madagasikara tamin’ny dingan’ny fifanintsanana. Tamin’izany indrindra no nihaonantsika tamin’i Sao Tome et
Principe (faha-185 Fifa) ka nandavoantsika azy ireo tamin’ny tambatr’isa 4 noho 2 -1 – 0, 3 – 2). Tafara-bondrona tamin’i Sénégal (faha-22 Fifa) sy Soudan (faha-130 Fifa) ary Guinée Equatoriale (faha-141 Fifa) ny Barea, vokatr’ izany, tamin’ny fihodinana faharoa. Vao teo amin’ny andro fahe­fatra dia efa azontsika ny tapakilan’ny CAN, rehefa avy nandresy an’i Soudan (3 – 1) sy ady sahala tamin’i Sénégal (2 – 2) niampy ny fandresena indroa nisesy an’i Guinée Equatoriale (1 – 0, 1 – 0). Faharesena avy kosa no nanjo antsika tamin’ny lalao miverina ho an’i Soudan (3 – 1) sy Sénégal (2 – 0).
Nanomboka teo dia efa nanoman-tena fatratra ny Barea. Maro tamin’ireo Malagasy no tsy nanam-po fa ho lasa lavitra izany Barean’i Madagasikara izany, taorian’ireo lalao ara-pirahala­hiana natrehana tamin’i Kenya sy Luxembourg ary Maoritania.
Teo amin’ny lalaom-bondrona ho an’ny dingan’ny famaranan’ ny CAN anefa dia nanom­boka niova hevitra ireo tsy nino.
Nisaraka ady sahala 2 sy 2 i Madagasikara sy Guinée (faha-71 Fifa) tamin’ny andro voalohany (22 jona). Lavon’i Barea tamin’ny isa 1 noho 0 ny Hirondelles avy any Burundi (faha-134 Fifa), ny ampitson’ny fetin’ny Fahaleovantena malagasy (27 jona). Mbola nofaizin-dry Nicolas Dupuis, tamin’ny isa 2 noho 0 ihany koa ny Super Eagles avy any Nizeria (faha-45 Fifa), teo amin’ny andro farany ho an’ny lalaom-bondrona (30 jona) ka nahatonga antsika ho laharana voalohany teo amin’ny vondrona B. Ny Léopards avy any Repoblika Demokra­tikan’i Congo (RDC) indray no nihaona tamintsika teo amin’ny lalao ampahavalon-dalana. Nalain’ny Barea ny tapakilan’ny ampahefa-dalana, tamin’ny fandresena ny ekipan’i Florent Ibenge (faha-49 Fifa), tamin’ny “tirs au but” (4 – 2), rehefa nisa­raka tamin’ny ady sahala 2 sy 2 ny roa tonta teo amin’ny fe-poto­ana ara-dalàna niampy fanalavam-potoana.
Nandritra ny fizaram-potoana voalohany dia toa niaina tamin’ny fiarovan-tena ny mpilalaon’i Nicolas Dupuis. Tsy nety nahomby ny 4-3-3 (Adrien-Métanire, Fontaine, Bapasy, Mombris-Marco, Anicet, Amada-Carolus, Faneva, Bôlida) napetrak’ity mpanazatra nasionaly malagasy ity, izay tsy nisy fanovana mihitsy tamin’ireo lalao rehetra natrehantsika tany Ejipta.
Tsy nety tafiditra tao anatin’ny lalao ihany koa i Carolus Andriamahitsinoro ka banga tanteraka tao afovoany. Nisy aza ny baolina tokony ho fatiny saingy toa very an-javony.
Nanjakazaka, vokatr’izany, ireo irakiraka Toniziana. Efa nahazo «coups franc» teo anoloan’ ny faritra tsy azo ivalozana ny Toniziana saingy navotan’i Adrien Melvin, mpiandry tsatokazon’ny Barean’i Madagasikara. Voatana ihany aloha ny ady sahala,
samy tsy nitoko, teo am-pialan-tsasatra.
Teo amin’ny minitra faha-52 anefa no voafitak’i Thomas Fontaine, nahadona ny baolina, i Adrien Melvin, tamin’ny dakan’ i Ferjani Sassi, ka nanakobana ny haraton’ny Malagasy. Niampy iray indray anefa izany, valo minitra taorian’io, tamin’ny fanafihana noentin’i Whabi Khazri, mpilalaon’ny AS Saint-Etienne (Ligue 1, Frantsa), ary nofaranan’i Youssef Msakni, kapitenin’ny Aigles de Carthage.
Nampiditra an’i Njiva Rakotoharimalala sy Voavy Paulin, hikatsaka fanasahalana ny isa i Nicolas Dupuis saingy toa tara loatra izany. Toa tsy nahatoky an’ireo mpilalao mpisolo toerana ity mpanazatra nasionaly ity saingy efa hita ny harerahana nitaky teo amin-dry Faneva Ima Andriatsima sy Nomenjanahary Lalaina. Mbola niampy indray aza ny isa ho an’ny Toniziana tany amin’ny minitra faha-90 tamin’ny baolina iray matin’i Naïm Stili.
Hifandona eo amin’ny manasa-dalana voalohany, hotanterahina ao amin’ny kianjan’ny 30 jona, ao Le Caire, amin’ny 7 ora hariva (ora eto Madagasikara) ny Sénégal sy Tonizia. Teo amin’ny ampahefa-dalana dia ny ekipan’i Benin no resin’ny Lionan’i
Teranga, tamin’ny isa 1 noho 0.
Hihaona ao amin’ny kianja iraisam-pirenen’i Le Caire, amin’ny 10 ora alina kosa, eo amin’ny manasa-dalana faharoa, ny Super Eagles avy any Nizeria sy ny Fennecs avy any Alzeria. Teo amin’ny ampahefa-dalana dia lavon’ny nizeriana, tamin’ny alalan’ny isa 2 noho 1 ny Bafana Bafana avy any Afrika Atsimo. Ny Elefantan’i Côte d’Ivoire kosa no resin’ny Alzeriana, tamin’ny alalan’ny “tirs au but” (4 – 3), rehefa nisaraka tamin’ny isa nitovy 1 sy 1 teo amin’ny 120 minitra.
Vao maraina dia efa nahitana filaharana ireo fivarotana nanambara fa mivarotra fanampiana hoenti-manohana ny Barean’
i Madagasikara teto Antananarivo. Isan’ireny ny tetsy amin’ny Pavillon Analakely. «Hanohana ny ekipam-pirenena izahay ary manomana fiarahana ao an-trano. Samy hanao Tee-Shirt avokoa izahay na fanamiana misy ny lokom-pirenena. Izany no nahatonga anay hilahatra eto. Efa tamin’ny fiandohan’ny CAN no nikaroka izahay fa taty aoriandriana vao nisy toeram-pivarotana nametaka peta-drindrina fa mivarotra izany», hoy i Fenosoa Ralaimanana, mpanohana ny Barea tsy mba afaka nankany Ejipta.
Omaly maraina vao lasa ireo fiaramanidina roa nitondra an’ireo mpanohana malagasy
hihazo an’i Ejipta hijery ny lalaon’i Madagasikara sy Tonizia. Tokony ho tamin’ny alarobia alina no nanainga izany saingy noho ny pitsopitsony, izay mbola nahatara ny sidina, dia omaly tamin’ny 8 ora maraina no nanainga ny fiaramanidina voalohany. Tamin’ny 11 ora antoandro kosa no lasa ny fiaramanidina faharoa.
Antsapakan’ny CAN 2021 :: Mbola tafajanona ao amin’ ny satroka fahatelo ny Barea
Fahatongavan’ny ekipam-pirenena :: Hotsenaina makotrokotroka ny Barean’i Madagasikara